Last updated: May. 16 2019 | 2 min akhri
Qaybta ugu xumaa oo ku saabsan isagoo xilli danbe ah taariikhda la socda fool-ka-fool ah la qofka ayaa sugaya oo aad ku. Inkasta oo waxaa laga yaabaa in ay dhib tahay, daacad ah had iyo jeer waa siyaasadda ugu wanaagsan. Plus haddii taariikhda waa si dhab ah fahamka, isagu / iyadu si buuxda ku siin doonaa faa'iido u ah shaki ah. Hoos, shan cudur daar macquul ah in ay soo daahay taariikhda a.
Waxaad meel kulanka dhowr jeer googled, xafiday wadada, bidix dhowr daqiiqo hore weli aadan weli soo daahay. Hadday tahay culus gaadiidka ama aad ku dhuftey iftiin kasta cas, misjudging waqtiga waa qalad daacad ah in si fudud waa la cafin.
Si looga fogaado isticmaalaya Suri, Waxaan marar badan Google khariidada caga aan final oo waxay qaadan doonaan sawir ah tilmaamaha ka hor inta aan ka tago. Iyada oo ay tani u oggolaanaysa in waqti diyaarinta taariikhda saxda ah, Waxaan marnaba heli si sax ah uga digay markaan waa jeedin ama meesha saxda ah u socoto aan kama dambays ah taas oo iyana waxay keentaa in daahitaan. Mar labaad, isagoo afka hore oo arrintan ku saabsan sida caadiga ah ka dhigaysa for qososhay wanaagsan.
ma heli laga yaabaa in la dhigto
Ku noolaanshaha magaalo marar badan waxay ka dhigan tahay waxa jira la dhigto ma. Inkasta oo ay tahay ugu fiican in aad doorato meel masaafad socod, marar, taariikhda dhibco ugu xiiso ma aha meel fog socodka ku haboon iska. In xaalad this, waxaa fiican in la helo qaab-dhismeedka la dhigto ee ugu dhow halka xaqiijin in aad naftaada siiso waqti ku filan si ay u yimaadaan si wakhtiga dhowreysa.
Butros helay jiran
In lover xayawaanka (waxaan rajeynayaa in aad taariikhda sidoo kale waa), xayawaankaaga waa ilmahaaga. Iyadoo soo socda in la beddelo guriga ka dhisan ka hor taariikhda iyo turunturoodo ee guud ahaan xayawaankaaga yaa u muuqataa in ay ka yar cimilada, aad si dabiici ah u socdaan inay uga tacsiyeeyaan. Inkasta oo raaxo this qaadan kartaa waqti dheer intii la filayay, adiga iyo xayawaanka labada dareemi doontaa more istareexsan, gaar ahaan tan iyo markii aad habeen danbe waxaa laga yaabaa in ka badan sida caadiga ah.
Work dabayaaqadii orday
Laga soo bilaabo kulamada daqiiqadii ugu danbeysay in mashruuc impromptu inay is lumay ee aad shaqada, waxa oo dhan ka dhaca noo. Iyada oo ay tani lagu kalsoonaan karo shuqullada marmarsiinyo, waxaad hubisaa in aan ku soo galay caado sida aad taariikhda arki doontaa in aad loogu talagalay, shaqada waa ka badan oo mudnaan badan aad xiriir.
Wax kasta oo aad cudurdaar, waxaa muhiim ah in aad taariikhda in aad noqon doonto daahay. Ma aha oo kaliya waa this tilmaam fiican, laakiin waxa ay muujinaysaa in aad tahay qof daryeela.
10 Sababaha Maxaad Cats Ma Superior in ay saaxiibadood,
Waa maxay sababta aad isku daydo in ay qof oo aan Your Type
Sidee taariikhda Girl A tusiya Little Jacayl
Hayso burburin ah? Halkan Sidee in ay ogaadaan
© Copyright 2019 Taariikhda My Butros. La dhigtay by 8celerate Studio